Hiasa amin'ny APFS ve ny Macs antsika atsy ho atsy? | Avy amin'ny mac aho
Hiasa amin'ny APFS ve ny Macs antsika atsy ho atsy?
Javier Porcar | | tsaho, maro
Iray amin'ireo vaovao izay natolotry ny Mac OS Sierra ho anay dia ny fampidirana endrika vaovao amin'ny kapila mafy, araka ny hitantsika tamin'ny fampianarana teo aloha. Io no fiandohan'ny farany ho an'ny rafitra Apple tompon-tany, HFS + izay natolotry ny Apple tamin'ny taona 1998. Fa mandroso ny teknolojia ary ireo kapila SSD vaovao dia mamela ny hanararaotra ny fanatsarana ny filaminana sy ny asa.
Nianarantsika tamin'ity herinandro ity fa ny kinova iOS manaraka dia mety hampiditra ny rafitra fisie APFS vaovao. Raha ny fahitana azy, ny rafitra dia hamolavola ireo fitaovantsika iOS mandritra ny fametrahana ny kinova farany. Ary izany rehetra izany nefa tsy very vaovao ankehitriny.
Amin'ny Macs dia mety ho sarotra kokoa izany. Ny singa samihafa dia mifanerasera amin'ny Mac, ary ny tsirairay dia afaka manana endrika hafa. Miresaka momba ny kitay USB, kapila ivelany, kopian'ny Time Machine izahay. Noho izany, Apple dia tokony hiasa amin'ity indray mitoraka ity amin'ny alàlan'ny famaritana ny mpandidy.
Na izany na tsy izany dia resy lahatra izahay fa miasa amin'ny iray amin'ireo zavatra mahomby indrindra i Apple: ny fanaovana ny asa ho mora sy tsotra, tsy misy manahirana na manahy kely ho an'ny mpampiasa.
Raha vantany vao mahavita mampihatra ny rafitra APFS amin'ny Mac izy ireo dia afaka manararaotra ny fanatsarana izay hoentin'ity rafitra ity izahay.
APFS dia haingana kokoa noho ny rafitra ankehitriny, manararaotra ny zava-misy fa manohana 64bits izy. Nahazo valiny izay manatsara ny fotoana famaliana rehefa manatanteraka ny fizotrany. Izy io dia afaka mitantana fampahalalana bebe kokoa amin'ny fotoana fohy.
Iray amin'ireo zava-baovao resahina indrindra ny teknolojia «Crash Protection " izay mamela ny fitehirizan-tena, ny fahazoana filaminana ary amin'izay dia hialana amin'ny fahaverezan'ny vaovao ateraky ny lesoka noho ny fahaverezan'ny herinaratra.
Milamina kokoa, misaotra ny encryption data vaovao.
Ny data dia hita ary tsy manao kopia rakitra. Noho izany, mahazo toerana sy fahombiazana isika.
Na izany aza, raha tsy mifanaraka ny sasany dia tsy te hampiasa ny kapilao manontolo ianao APFS, ity endrika ity mamela anao hanana fizarazarana amin'ny endrika hafa.
Betsaka ny fiasa hafa, fa ilaina ny miandry ny hahafantatra amin'ny fomba lalina ny fomba fiasan'ity rafitra vaovao ity, ary koa ny fahafahan'ny mpamorona manararaotra ity rafitra vaovao ity.
vaovao farany: Araka ny lazain'ny mpamaky iray amintsika, Apple dia namoaka ny rafitry ny rakitra APFS tamin'ny fihaonambe farany an'ny WWDC 2016, eto azonao jerena amin'ny antsipiriany ilay fampisehoana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Hiasa amin'ny APFS ve ny Macs antsika atsy ho atsy?
Manome grimila kely ahy ity lohahevitra ity. Inona no hitranga amintsika izay manana ekipa manana SSD tsy tonga fenitra?
Rehefa namoaka APFS ny paoma dia nilaza ny fiasa sy ny asany, fa amin'ny taona 2017 dia hahatratra ny fitaovana rehetra ao aminy, ary koa ny fomba hanatsarana azo antoka avy amin'ny HFS + mankany amin'ny APFS, na ny macOS Sierra aza dia manana ny APFS ary manome demo izy ireo. Ity ny fihaonambe https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2016/701/
PS: Manoro hevitra anao aho ny hametraka ilay horonan-tsary na sary amin'ny famoahana satria mamaha fanontaniana na fisalasalana maro lazainao izany.
Mamaly an'i ernesto
Voavaha, misaotra ary miala tsiny.
Mitohy ny fe-potoana handaniana ny kaonty fanaovana doka amin'ny App Store
Ny divay, ilay fampiharana ahafahantsika mihazakazaka fampiharana Windows ao amin'ny Mac, dia novaina tamin'ny endrika vaovao maro